Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay sababta uu xilka ugu magacaabay Xasan Cali Kheyre (DHAGEYSO) - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay sababta uu xilka ugu magacaabay Xasan Cali Kheyre (DHAGEYSO)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo oo saakay aroortii saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday sababta rasmiga ah ee ka dambeysa inuu xilka ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ugu magacaabo Xasan Cali Kheyre.
Wuxuu madaxweyne Farmaajo sheegay in ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu yahay shaqsi uu la shaqeyn karo, islamarkaana ah aqoonyahan kasoo bixi kara xilkaan, isagoona dhinaca kale sabab uga dhigay inuu yahay shaqsi xilkaan u qalma.
Madaxweyne Farmaajo oo u muuqda shaqsi wax badan ka digtoonaa inuu xilkaan usoo magacaabo qof ay isla shaqeyn karaan, ayaa ka hortagaya khilaafka inta badan ragaadiyay dowladihii hore oo madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha ay isku dhac joogto ah kusoo jireen.
“Kadib markii muddo dheer doorashooyin lagu jiray waxaa ii cadaatay inaan magacaabo Xasan Cali Kheyre inuu dalka ka noqdo ra’iisul wasaare, anigoo ku doortay inuu yahay shaqsi u qalma jagada aqoon ahaan iyo khibrad ahaan anigoo arkay inaan wada shaqeyn karno, bacdamaa dalkaan muddo dowladii timaadaba is-bedelkeeda uu badnaa, waxaan go’aan ku qaatay inaan magacaabo anigoo og inaan wada shaqeyn doono uuna yahay shaqsi nadiif ah, fekerkeyga iyo hiigsigeygana ku shaqeyn doona.” Sidaas waxaa yiri madaxweyne Farmaajo.
Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo ayaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku ansixiyaan ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, si uu isagana usoo dhiso xukuumadda cusub.
“Guddoomiyaha baarlamaanka iyo golaha shacabka waxaan ka codsanayaa inay ansixiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan haduu Ilaahay yiraahdo, si uu u guto waajibaadkiisa, aniga waxaan haystaa muddo 30 cisho inaan ku soo magacaabo maanta waa maalintii 16-aad ma doonaayo dalka inuu waqti dambe ka khasaaro ama ka lumo” Ayuu yiri Farmaajo.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay la shaqeeyaan ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, isagoona dhinaca kale ra’iisul wasaaraha ku booriyay inaanu waqti badan lumin, muddo 15 maalmood ahna uu kusoo magacaabo xukuumad cusub oo wanaagsan islamarkaana dalka wax u qaban karta.